Ummeli welungelo le-NJ, i-Hackensack mhlawumbe igqwetha, i-Thatha ye-Last kanye neTestamente
IJean City Probate Attorney Yommeli Wezezakhiwo, Okulamula, Amawayile kanye nama-Trust
Ikhaya / IJean City Probate Attorney Yommeli Wezezakhiwo, Okulamula, Amawayile kanye nama-Trust
Njengommeli waseNew Jersey, sizokusiza uzuze i-Probate Litigation noma ulungiselele i-Thatha yakho
EHhovisi Lezomthetho likaPatel noSoltis, singasiza nganoma yiziphi izidingo zakho zefa lakho. Abameli bethu bangakumela ezingxabanweni nge-will and trust, ukuphathwa kwempahla, noma ukumangalelwa okuthuthukile ku-Hudson County, Essex County, Union County, Bergen County, Mercer County, Monmouth County, Morris County, Passaic County, Somerset County, noma Middlesex County .
Izinselele zeTestamente (Izizathu zokuphonsela inselelo intando efana nokuntula kwamandla okwenza umyolelo, omunye uzokwenziwa bese om.)
Our Abameli Abasebenza Ezezakhiwo eJersey City kuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kakhulu neziphendulayo kwekhasimende ngalinye. Ingxabano yakho yefa lakho ingaxazululwa ngokumangalelwa noma ngokuxoxisana futhi kunoma yikuphi, sizokulwela. Siyaqonda ukuthi ukulahlekelwa umuntu esimthandayo kungaba yisikhathi esikhokhiswa kakhulu ngokomzwelo nokuthi lokhu kwenezela ingcindezi eyengeziwe kuwo wonke umuntu. Sisebenzela ukuqinisekisa ukuthi amaklayenti ethu aphathwa ngenhlonipho. Silalele izidingo zakho njengamakhasimende ethu, futhi asikaze sikubone ungumuntu nesimo ohlangabezana naso. Uma udinga usizo ngokuthengisa ingcebo yendawo singabona ukuthi uthola imali eningi kakhulu yendawo futhi uvikele nefa ngokusebenzisa enye yethu NJ Real Estate Ukuvala Abameli.
Buza abameli eNew Jersey phesheya kweNkantolo
Xhumana nehhovisi lethu ukuze ukhulume nommeli we-probate eNew Jersey nokuthi singakusiza kanjani ku (973) 200-1111 noma usithumele i-imeyili ku [Email protected].